Tag: ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Tag: ndị ahịa
Pasent ole nke ndị ahịa, na nkezi, na-atụ uche oke ha? Gini bu onodu nso nso? Ego ole ka mma ahịa reps kacha mma na-arụ ma e jiri ya tụnyere nkezi? Pasent ole nke ndị na-ere ahịa na-aghọta n'ezie ihe mgbu ndị ahịa ha? Pasent ole nke ndị na-ere ahịa na-eche na pipeline ziri ezi? Na mmekorita ya na Salesforce Work.com, ihe omuma a sitere na TAS Group na-eweputa uzo iri di nkpa banyere oru ahia. Ma ị hụtara ya dịka ihe ịtụnanya, ma ọ bụ
Ihe omume Techmakers na-esote ga-abụ nke pụrụ iche! Enwere m ekele maka ohere ikwu okwu na ndị na - eme ya na - enye ndị na - ege ntị ihe dị iche. Ndị na-emepụta nkà na ụzụ bụ ndị ọkachamara na nkà na ụzụ ndị na-edozi ọdịiche dị n’etiti njedebe na njedebe ndị folks. Enwekwara ngwakọta mara mma nke obere na obere azụmaahịa na-abịa ihe omume ndị a. Ihe omume na-esote ga-abụ na Scotty's Brewhouse na ogbe ndịda na Tuesday, Jenụwarị 5th na 5: 30Pm. Enwere m olileanya na ị ga-adị